वेब होस्टिंग समीक्षा: नवीनतम होस्ट प्रदर्शन र छनौट समीक्षा गर्नुहोस्
वेब होस्ट छनौट गर्नुहोस् होस्टिंग शपर्सका लागि १--सूत्री चेकलिस्ट।
वेब होस्ट तुलना एक पटकमा3वेब होस्टहरूको तुलना गर्नुहोस्।
घर » होस्टिङ समीक्षाहरू
WHSR वेब होस्टिंग समीक्षा
जेरी कम र टीम WHSR द्वारा
अपडेट गरिएको: मई 07, 2020
+०+ वेब होस्टिंग समीक्षा र द्रुत तथ्यहरू
हामीले वेब होस्टको मूल्या assess्कन गर्दा हामीले छवटा मुख्य पक्षहरू हेर्छौं: सर्वर प्रदर्शन, आवश्यक सुविधाहरू, ग्राहक समर्थन, प्रयोगकर्ता मित्रता, कम्पनी प्रतिष्ठा र प्रमाणित प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया, साथै मूल्य। हामी होस्टिंग कम्पनीहरू आफैंमा परीक्षण साइटहरू सेटअप गर्छौं र होस्टिंग सेवाको गुणस्तरको मूल्या rate्कन गर्न 80०-पोइन्ट चेकलिस्ट प्रयोग गर्दछौं। तपाईं कसरी वेब होस्टलाई रेट गर्नुहुन्छ भन्ने बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
000 वेबहस्ट 1GB 10GB cpanel $ 0.00 / mo - -
Cloudways 25 जीबी 1 टीबी मा-घर $ 10 / mo - WHSR10
TMDHosting असीमित असीमित cpanel $ 5.95 / mo 60 दिन -
20i 10GB 50GB WordPress $ पाउन्ड 4.58 / mo 30 दिन -
WPWebHost 30 जीबी असीमित plesk $ 9.00 / mo 100 दिन APRILDEAL50
1 र 1 होस्टिंग असीमित असीमित अनुकूलन $ 4.99 / mo 30 दिन -
Kinsta 10 जीबी 20,000 भ्रमणहरू WordPress $ 25 / mo 30 दिन -
MightWeb 10GB असीमित cpanel $ 4.95 / mo 30 दिन -
FastComet 15 जीबी SSD असीमित cpanel $ 2.95 / mo 45 दिन -
Temok 50 जीबी असीमित cpanel $ 3.99 / mo 15 दिन OLEG7513
पुनर्विक्रेताClub होस्टिंग असीमित असीमित cpanel $ 2.39 / mo 30 दिन HOSTINGDEAL
Zyma होस्टिंग 25 जीबी असीमित cpanel $ पाउन्ड 1.49 / mo 30 दिन -
तरलवेब 50 जीबी SSD5टीबी अनुकूलन $ 66.33 / mo - WordPress33
Host1Plus असीमित असीमित cpanel $ 4.50 / mo 14 दिन -
Hostinger असीमित असीमित cpanel $ 3.99 / mo 30 दिन लिङ्क सक्रियिकरण
फास्टवेबहाउस 20 जीबी असीमित cpanel $ 2.95 / mo 30 दिन लिङ्क सक्रियता
GoGetSpace असीमित असीमित cpanel $ 3.99 / mo 30 दिन WHSR-SPECIAL2017
ScalaHosting असीमित असीमित अनुकूलन $ 6.95 / mo 30 दिन -
SkyToaster 10 जीबी 500 जीबी cpanel $9/ mo 45 दिन -
ZeroStopBits 10 जीबी असीमित cpanel $ 3.50 / mo 30 दिन -
WP इन्जिन 10 जीबी 50 जीबी WordPress $ 22.50 / mo 60 दिन WPE3Free
WebHostingHub असीमित असीमित cpanel $ 4.99 / mo 90 दिन -
वेबहोस्टप्राप्त 20 जीबी SSD असीमित cpanel $ 1.09 / mo 30 दिन WHSRPC
StartLogic असीमित असीमित cpanel $ 5.99 / mo 30 दिन -
StableBox - - क्लाउडलिनक्स - - -
SiteGround 20 जीबी असीमित अनुकूलन $ 14.99 / mo 30 दिन लिङ्क सक्रियता - नयाँ प्रयोगकर्ता प्रोमो
RoseHosting 8 जीबी 1000 जीबी cpanel $ 11.95 / mo 30 दिन -
Pressidium होस्टिंग 10 जीबी असीमित WordPress $ 42 / mo 60 दिन -
PowWeb असीमित असीमित cpanel $ 3.88 / mo 30 दिन -
PeoplesHost5जीबी 10 जीबी cpanel $ 8 / mo 60 दिन -
इष्टतम होस्टिंग - - WordPress - - -
One.com 25 जीबी असीमित cpanel $ 2.45 / mo 15 दिन -
ओमिस नेटवर्क असीमित असीमित cpanel $ 5.95 / mo 30 दिन -
नेटवर्क समाधानहरू 300 जीबी - cpanel $ 9.96 / mo 30 दिन -
Netmoly 10 जीबी असीमित cpanel $ 5.95 / mo 45 दिन WHSR
मिस होस्टिंग असीमित असीमित cpanel $ 8.31 / mo 45 दिन -
MidPhase असीमित असीमित cpanel $ 3.48 / mo 30 दिन -
मिडिया म्यान 20 जीबी 1 टीबी plesk $ 15.83 / mo 30 दिन -
MDD होस्टिंग 1 जीबी असीमित cpanel $ 3.15 / mo 30 दिन -
M3 सर्भर 30 जीबी5टीबी inhouse $ 15 / mo 30 दिन WHSR20
LunarPages असीमित असीमित अनुकूलन $ 6.95 / mo 30 दिन -
Little Oak होस्टिंग5जीबी 50 जीबी cpanel $ 6.67 / mo 30 दिन -
JustHost असीमित असीमित cpanel $ 7.95 / mo 30 दिन -
IX वेब होस्टिंग - - - $ 2.95 / mo 30 दिन (लिंक सक्रिय)
आइपेज असीमित असीमित vdeck $ 2.49 / mo 30 दिन (लिंक सक्रिय)
InterServer असीमित असीमित cpanel $ 4.25 / mo 30 दिन WHSRPENNY
InMotion होस्टिंग असीमित असीमित cpanel $ 5.99 / mo 90 दिन (लिंक सक्रिय)
HostUpon असीमित असीमित cpanel $ 9.95 / mo 30 दिन -
होस्ट रकेट5जीबी 200 जीबी cpanel $ 9.98 / mo 30 दिन -
HostPapa असीमित असीमित cpanel $ 4.95 / mo 30 दिन WHSR
Hostmonster असीमित असीमित cpanel $ 8.45 / mo 30 दिन -
HostMetro असीमित असीमित cpanel $ 3.95 / mo 30 दिन -
Hostgator असीमित अनमात्रित cpanel $ 8.95 / mo 45 दिन WHSRBUILD
होस्ट रंग 10 जीबी 1000 जीबी cpanel $ 9.30 / mo5दिन NEWVPS
GreenGeeks असीमित असीमित cpanel $ 3.95 / mo 30 दिन (लिङ्क सक्रियिकरण)
GoDaddy असीमित असीमित cpanel $ 9.39 / mo 30 दिन (लिङ्क सक्रियता)
FatCow असीमित असीमित vdeck $ 4.08 / mo 30 दिन -
eHost असीमित असीमित cpanel $ 2.75 / mo 45 दिन -
DTS-NET 10GB असीमित cpanel $ 0.63 / mo 60 दिन WHSR
DreamHost असीमित असीमित अनुकूलन $ 8.95 / mo 97 दिन WHSR25
Dot5 होस्टिंग असीमित असीमित vdeck $ 5.95 / mo 30 दिन -
क्रुद्धीय पैरागिग 30 जीबी असीमित cpanel $ 10 / mo - -
CoolHandle असीमित असीमित cpanel $ 4.95 / mo 30 दिन -
बुलबुलाहोस्ट5जीबी 250 जीबी cpanel $ 3.12 / mo 30 दिन WHSR40
BlueHost 50 जीबी असीमित cpanel $ 3.95 / mo 30 दिन (लिंक सक्रिय)
B3 होस्टिंग5जीबी 50 जीबी cpanel $ 35.00 / mo - -
ASmallOrange5जीबी 50 जीबी cpanel $ 7.17 / mo 90 दिन -
अर्भिक्स असीमित असीमित cpanel $ 7.00 / mo 45 दिन -
AltusHost 10 जीबी असीमित cpanel $ 5.95 / mo 45 दिन -
A2 होस्टिंग असीमित असीमित cpanel $ 4.90 / mo 30 दिन WHSR / SAVE63
* कमाई प्रकटीकरण: WHSR ले हाम्रो वेबसाइट सामग्रीबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दछ। हामी भुक्तानी पाउँछौं जब हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रा रेफरल लिंकहरू मार्फत खरीद गर्छन्।
सही वेब होस्ट कसरी छनौट गर्ने?
वेब होस्ट राम्रो छ कि छैन भनेर हामी कसरी निर्णय गर्ने? के ब्यान्डविथ र डिस्क भण्डारण सुविधाहरू यी दिनहरूमा फरक पर्दछ? तपाईं कुन प्रकारको होस्टिंग सेवाको साथ जानुहुन्छ?
मलाई तपाईलाई यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न मद्दत गर्नुहोस् र अधिक। म तपाईंलाई सही वेब होस्टिंग कसरी छनौट गर्ने बारे सबै जान्दछु भनेर सुनिश्चित गर्न पूर्ण واکथ्रुको साथ बाटोमा मार्गदर्शन गर्दछु।
वेब होस्ट चयन जाँचसूची
वेब होस्टको समीक्षा र छनौटमा यति धेरै कारकहरू सामेल छन् - कि यसले प्रायः मानिसहरूलाई डराउँदछ। यहाँ १ points पोइन्टहरू छन् तपाईले नयाँ वेब होस्ट लिनु अघि।
तपाईंको होस्टिंग आवश्यकताहरू जान्नुहोस्
सर्भर विश्वसनीयता र अपटाइम ग्यारेन्टीहरूको जाँच गर्नुहोस्
स्तरवृद्धि विकल्पहरू होस्टिंग
एडोन डोमेनको संख्याहरू
साइनअप मूल्यहरु नवीकरण मूल्यहरु बनाम
फिर्ता रकम र नि: शुल्क परीक्षण अवधि
आवश्यक होस्टिङ सुविधाहरू
ई-वाणिज्य सुविधाहरू र समर्थन
इमेल होस्टिंग ([इमेल सुरक्षित])
लाइभ कुराकानी / टेलिफोन समर्थन
1। तपाईंको होस्टिंग आवश्यकता थाहा पाउनुहोस्
तपाईले के चाहिन्छ भनेर जान्न बिना तपाईले वेब होस्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईं अघि बढ्नुभन्दा अघि - सबै कुरालाई अलग राख्नुहोस् (यो मार्गदर्शक तपाइँ पढ्दै हुनुहुन्छ) र तपाईलाई वास्तवमा चाहिन्छ के बारे सोच्नुहोस्।
कस्तो प्रकारको वेबसाइट तपाई निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ?
के तपाइँ केहि सामान्य चाहनुहुन्छ (एक WordPress ब्लग, सायद)?
तपाइँलाई विन्डोज अनुप्रयोगहरू चाहिन्छ?
तपाईंलाई एक विशेष लिपि (जस्तै PHP) को लागि समर्थन चाहिन्छ?
के तपाईको वेबसाइटलाई विशेष सफ्टवेयर चाहिन्छ?
तपाईंको वेब ट्राफिक मात्रा कति ठूलो (वा सानो) सक्छ?
यी केहि आधारभूत प्रश्नहरू हुन् जुन तपाई आफैले जवाफ दिन चाहानुहुन्छ।
तपाईंको दिमागमा तस्विर के तपाई अहिले आफ्नो वेबसाइट चाहानुहुन्छ जुन त्यस विचारको निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ जब सम्म तपाईं लगभग 12 महिना भन्दा अघि सम्म पुग्नुहुन्छ। तपाईं के प्रस्ताव गर्न चाहानुहुन्छ मात्र विचार नगर्नुहोस्, तर यो पनि के गर्न सक्छ वा आवश्यक पर्दछ।
यो अन्तमा एक धेरै सरल तथ्यलाई ढिलो गर्छ। तपाईको वेबसाइटलाई कति सम्भावना चाहिन्छ? यदि तपाइँ एक व्यक्तिगत ब्लग चलाउन वा सानो वेबसाइटमा सानो गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो सम्भव छैन कि तपाईंलाई VPS होस्टको थप क्षमताहरू आवश्यक पर्दछ।
यदि तपाईं ठूलो व्यापार सर्भर चलाइरहनुभएको छ वा धेरै इ-कमर्सस गतिविधिहरू लिइरहेछ भने, त्यसपछि ट्राफिकको ठूलो मात्रा व्यवस्थापन र अतिरिक्त विश्वसनीयताको लागि एक VPS वा समर्पित सर्भर आवश्यक पर्दछ।
दिनको अन्त्यमा, हरेक छनोटको आफ्नै लागत स्तर र विशेषताहरू छन्, यहाँ वेब होस्टिंगको दुई कोटीहरूको बीच मैले यहाँ वर्णन गरेको छु। विवरणलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक छ र तपाईंको वेबसाइटको आवश्यकताहरुसँग मेल खाएको छ।
यदि तपाइँ पूर्ण रूपमा नयाँ हुनुहुन्छ ...
Newbies को लागि, सरल नियम एक राम्रो साझा होस्टिंग खाता संग सानो शुरू हुन्छ।
एक साझा होस्टिङ खाता सस्तो, सजिलो राख्न, र धेरै नयाँ साइटहरूको लागि पर्याप्त छ। यसले तपाइँलाई अन्य साइट-साइड कार्यहरू जस्तै डाटाबेस मर्मत र सर्भर सुरक्षाको बारेमा चिन्ता बिना तपाईँको साइट निर्माण गर्न फोकस गर्न दिन्छ।
अलोक, किनकि होस्टिङ योजनाहरू आजकल स्केलेबल योग्य छन्, यो राम्रो सुरू गर्न र तपाईंको बाटोमा काम गर्न राम्रो छ जुन तपाईंको साइट ट्राफिक बढ्छ। यो अधिक लागत प्रभावी हुनेछ र तपाईंको व्यवस्थापन क्षमताहरूलाई स्वाभाविक रूपले तपाइँको वेबसाइट ट्राफिकको साथ मापन गर्न अनुमति दिन्छ।
2। सर्भर विश्वसनीयता / रिक्तता स्कोर
केहि २ more × operating अपरेटिंग वेब होस्ट हुनु भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण छैन, जे भए पनि तपाईका आगन्तुकहरू विश्व साइट भरको समय क्षेत्रबाट तपाईंको साइटमा आउन सक्छन्। तपाईंलाई वेब होस्ट आवश्यक छ जुन स्थिर हो, दुबै सर्भरका साथै नेटवर्क जडानहरूमा पनि। । 24%% आजका दिनका लागि सामान्य मानिन्छ, साझा गरिएको होस्टिंग खाताहरूको लागि पनि; % 7% भन्दा कम केहि अस्वीकार्य छ। प्रीमियम खाता प्राय:। 99.95%% वा राम्रो अपटाइमको घमण्ड गर्दछ।
वेब होस्ट अपटाइम जानकारी प्राप्त गर्न विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यसो गर्न सरल तरीका हो हाम्रो होस्टिंग समीक्षाहरू पढ्दै - जहाँ हामीले समय-समयमा समय अपटाइम रेकर्डहरू प्रकाशित गर्दछौं (तलका नमूनाहरू हेर्नुहोस्)।
वैकल्पिक रूप मा, तपाईं सजिलै संग आफ्नो वेब होस्ट को ट्रयाक गर्न सक्नुहुन्छ सर्भर निगरानी उपकरणहरू - यी धेरै उपकरणहरू नि: शुल्कका लागि उपलब्ध छन्, वा कम से कम एक परीक्षण अवधि प्रस्ताव। तिनीहरू कुशल र प्रयोग गर्न सजिलो छन्।
उदाहरण: अपटाइम नमूना WHSR मा प्रकाशित
हामी हाम्रो होस्टिंग समीक्षामा अपटाइमलाई धेरै जोड दिन्छौं, तलका केही विगत रेकर्डहरू छन् जुन हामीले अपटाइम रोबोट प्रयोग गरेर जम्मा गरेका छौं। हामीले पनि सुरुवात गरेका छौं होस्टस्कोर (एक स्वचालित अपटाइम ट्र्याकिंग उपकरण) सेप्टेम्बर २०१ 2019 मा फिर्ता, म सुझाव दिन्छु कि वास्तविक अपटाइम रेकर्ड चाहनेहरूलाई जाँच गर्नुहोस्।
साइटग्राउन्ड अपटाइम रेकर्ड (Src: साइटग्राउन्ड होस्टिंग समीक्षा)
InMotion होस्टिंग अपटाइम रेकर्ड (Src: InMotion होस्टिंग समीक्षा)
3। सर्भर अपग्रेडिंग विकल्पहरू
त्यहाँ मार्केटमा विभिन्न प्रकारका होस्टिंग सर्भरहरू उपलब्ध छन्: साझेदारी गरिएको, VPS, समर्पित, र क्लाउड होस्टिंग।
होस्टिंग साझा गरियो
साझा होस्टिंग प्राय: शुरुआतकर्ताहरू, ब्लगरहरू, र व्यक्तिगत वेबसाइट मालिकहरूको लागि उत्तम विकल्प हो किनभने यो वेब होस्टिंगको सस्तो रूप हो, जुन प्रतिमहिना $ - - $ १० लागत छ।
साझा होस्टिंग योजनाहरूको साथ, तपाईं आफ्नो सर्वर संसाधनहरू अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग साझा गर्नुहुनेछ, जसको अर्थ होस्टिंगको लागि तपाईंलाई कम तिर्ने छ किनकि यसको लागत अन्य प्रयोगकर्ताहरू बीच साझा गरिएको छ।
कसले साझा होस्टिङको साथ जान पर्छ?
सामान्यतया, यदि तपाइँ प्रति महिना 5,000 आगन्तुकहरु भन्दा कम पाउनु भएको छ भने साझा गरिएको होस्टिंगमा जानु उत्तम हो। जब तपाइँको वेबसाइट ठुलो हुन्छ र तपाइँ अधिक आगन्तुकहरु प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ अझ शक्तिशाली सर्भरमा जान चाहानु सक्नुहुन्छ।
साझेदारी गरिएको होस्टिङ: सजिलो, सजिलो राख्न; सीमित सर्भर नियन्त्रण र पावर।
A भर्चुअल निजी सर्भर (VPS) होस्टिङ साझा होस्टिंग जस्तै छ कि यो एक भौतिक सर्वर साझा। भिन्नता यो छ कि तपाईंसँग आफ्नै सर्वर संसाधनहरू छन् जुन अन्य प्रयोगकर्ताहरू भन्दा पृथक छ।
VPS होस्टिंगको साथ, यो शक्ति र गति को सर्तमा साझा होस्टिंगबाट मूल रूपमा एक कदम हो तर यो तपाईंको आफ्नै समर्पित सर्भर भन्दा सस्तो छ। CPU र मेमोरी (र्याम) मा निर्भर गर्दछ जुन तपाईं प्राप्त गर्नुहुन्छ, VPS होस्टिंग anywhere 50 देखि month 200 प्रति महिना सम्म कतै खर्च गर्न सक्दछ।
VPS होस्टिंग: अधिक सर्भर नियन्त्रण र शक्ति; साझा होस्टिंग भन्दा pricier।
क्लाउड होस्टिंगले एक विशाल सर्भरको रूपमा कार्य गर्न सयौं व्यक्तिगत सर्भरहरू सँगै जोड दिन्छ। क्लाउड-आधारित वेब होस्टिंगसँगको विचार यो हो कि तपाइँ सजिलैसँग मापन गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यक हुँदा तपाइँको सर्भर आवश्यकताहरू अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ अचानक वेब ट्राफिक को एक असामान्य रूप मा ठूलो मात्रा को साथ सामना गरी रहे हैं, तपाई बन्द हुने बारे चिन्ता लिनु पर्ने छैन किनकि होस्टिंग कम्पनीले सजिलैसँग अधिक सर्भर संसाधनहरू थपेर यातायातको वृद्धि समायोजित गर्न सक्दछ।
क्लाउड होस्टिंगको लागि मूल्य भिन्न हुन्छ किनकि तिनीहरू सामान्य रूपमा एक मूल्यको लागि प्रयोग मूल्य निर्धारण को लागी प्रयोग को लागी ढाँचा प्रयोग गर्दछ।
क्लाउड होस्टिंग: अत्यन्त लचिलो र लागत कुशल; स्टीपर सिकाउने वक्र सुरु गर्न।
समर्पित सर्भर होस्टिंग जब तपाईंसँग एक पूरा भौतिक सर्वर छ जुन तपाईंको वेबसाइटमा समर्पित छ। न केवल तपाईसँग तपाईको सर्वर संसाधनहरूको पूर्ण नियन्त्रण छ, तर तपाईले अन्य वेबसाइटहरु बारे चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईका श्रोतहरु लिई र आफ्नो वेबसाइटलाई सुस्त बनाउँदै।
वेबसाइटहरूका लागि ठूला ठूला छन् र ठूला उपस्थिति छ भने, समर्पित सर्भर सामान्यतया यातायातको उच्च रकम संकलन गर्न सिफारिश गरिन्छ। समर्पित सर्भरको लागत साझा होस्टिङ भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँले $ 100 बाट र प्रति महिना भन्दा माथि तिर्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
समर्पित होस्टिंग: महान सर्भर पावर र पूर्ण सर्भर नियन्त्रण; उच्चतम लागत र कौशल चाहिन्छ।
साझा वेब होस्ट शक्तिशाली र नयाँ उपयोगकर्ताहरु को लागी पर्याप्त छ। यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट वास्तवमै छिटो बढ्ने आशा गर्नुहुन्छ भने एउटा लिने विचार गर्नुहोस् भर्चुअल निजी (VPS) वा समर्पित सर्भर अधिक प्रसोधन क्षमता, मेमोरी क्षमता, डिस्क भण्डारण, र सायद पनि विस्तारित सुरक्षा सुविधाहरूको लागि।
प्रतिष्ठित होस्टिंग कम्पनीहरु जसले सबै चार होस्टिंग विकल्पहरू प्रदान गर्दछ (साझेदारी गरिएको / VPS / समर्पित / क्लाउड) मा समावेश: A2 होस्टिंग, InMotion होस्टिंग, र SiteGround.
4। बहु एडसन डोमेनहरू
डोमेन नाम सस्तो छ - वास्तवमा सस्तो सस्तो छ कि यो प्रायः एक भन्दा बढी स्वामित्वको विरोध गर्न गाह्रो हुन्छ।
मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो GoDaddy र NameCheap खाताहरूमा 50० भन्दा बढी डोमेन नामको स्वामित्व छ - र म एक्लो छैन। यस अनुसार यो वेब होस्टिंग टकको सर्वेक्षण - 80% मतदाताहरूको5डोमेन भन्दा बढी छ र मतदाताहरूको 20% भन्दा बढी 50 भन्दा बढी छ!
यी अतिरिक्त डोमेनहरू समायोजन गर्न, हामीलाई अतिरिक्त होस्टिङ ठाउँ चाहिन्छ। यसैले यो एउटा होस्टिंग होस्टिंग खाता हो जसले बहु डोमेनहरू थप्ने अनुमति दिन्छ।
50 एडसन डोमेन भन्दा बढीको साथ वेब होस्टको लागि हेर्नुहोस्
सामान्यतया, अधिकांश बजेट-अनुकूल साझा होस्टिङ कम्पनीहरूले कम्तिमा 25 एडसन डोमेनहरू अनुमति दिन्छ * एक खातामा आजकल तर तपाईलाई कहिल्यै पक्का हुन सक्नुहुन्न। केही वर्ष अघि म लापरवाही भएको थिएँ र वेब होस्टमा साइन अप गरे जुन केवल एक डोमेन अनुमति दिन्छ। दुर्भाग्यवश, म उस समयमा 10 पार्क गरिएका डोमेन भन्दा अधिक पकडिरहेको थिएँ। मेरो गल्ती दोहोर्याउनुहोस् - तपाईंले खरीद गर्नु अघि डोमेन क्षमता जाँच गर्नुहोस्।
उपयोगी सुझाव: Addon डोमेन = अलग डोमेन संग अलग वेबसाइट छ कि तपाईं वेब होस्ट मा होस्ट गर्न सक्छन्; पार्क गरिएको डोमेन = अतिरिक्त डोमेन तपाईंले डोमेन फर्वार्डिङको लागि "पार्क" वा ईमेल होस्टिंग।
5। साइनअप बनाम नविकरण मूल्य
होस्टिङ सम्झौता, विशेष गरी साझा होस्टिंगको लागि, सामान्यतया साइनअपको समयमा। सावधान रहनुहोस् यद्यपि यी प्रायः धेरै उच्च नविकरण मूल्यको साथ आउँछ, त्यसैले त्यस योजनामा ​​'खरीद' क्लिक गर्नु सावधान रहनुहोस् कि तपाइँ 80% छुटमा साइन अप मूल्य प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ!
यो उद्योगको आदर्श हो।
जबसम्म तपाइँ दुई हप्तामा दुई वा तीन वेब होस्टहरू बीच हप गर्न इच्छुक हुनुहुन्न, pricey नविकरण लागतबाट बच्न कुनै पनि तरिका छैन।
हाम्रो होस्ट समीक्षामा, हामी होस्टहरूको लागि बिन्दु घटाउछौं जसले नवीकरणमा उनीहरूको मूल्य 50०% भन्दा बढी लिन्छ। तर सामान्यतया म १००% मूल्य जम्पभन्दा तल नवीकरण गर्ने कम्पनीहरूसँग ठीक छु - जसको अर्थ, यदि तपाईले $ / / mo मा होस्ट साइन अप गर्नुभयो भने, नविकरण शुल्क १० mo / mo भन्दा माथि जानु हुँदैन।
कुनै अप्रिय आश्चर्य देखि बचने को लागि, ToS को जांच गर्नुहोस र सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईं साइन अप गर्नु भन्दा नवीकरण दरहरु संग ठीक हो।
उपयोगी सुझाव: यो गर्न को लागी एक द्रुत तरीका होस्टिंग कम्पनीको ToS लिङ्क (सामान्यतया होमपेजको तलमा) क्लिक गर्नुहोस्, Ctrl + F थिच्नुहोस्, र "नवीकरण" वा "नवीकरण" शब्द खोज्नुहोस्।
तुलना गर्नुहोस्: साइनअप बनाम नविकरण मूल्य
ध्यान दिनुहोस् कि सामान्यतया होस्टिङ कम्पनीहरू जसले आफ्नो मूल्य साइन-अपमा स्लैश गर्दैछन् कि जैक अप नवीकरण मूल्य सबैभन्दा बढी।
A2 होस्टिंग $ 3.92 / mo $ 7.99 / mo + 100% अनलाइन भ्रमण गर्नुहोस्
AltusHost € 4.95 / mo € 4.95 / mo परिवर्तन छैन अनलाइन भ्रमण गर्नुहोस्
DreamHost $ 9.95 / mo $ 9.95 / mo परिवर्तन छैन अनलाइन भ्रमण गर्नुहोस्
Hostgator $ 8.95 / mo $ 13.95 / mo + 56% अनलाइन भ्रमण गर्नुहोस्
HostPapa $ 3.36 / mo $ 7.99 / mo + 110% अनलाइन भ्रमण गर्नुहोस्
InMotion $ 3.99 / mo $ 7.99 / mo + 100% अनलाइन भ्रमण गर्नुहोस्
InterServer $ 5.00 / mo $ 5.00 / mo परिवर्तन छैन अनलाइन भ्रमण गर्नुहोस्
आइपेज $ 1.99 / mo $ 7.99 / mo + 300% अनलाइन भ्रमण गर्नुहोस्
तरलवेब $ 69 / mo $ 69 / mo परिवर्तन छैन अनलाइन भ्रमण गर्नुहोस्
Pressidium $ 42 / mo $ 42 / mo परिवर्तन छैन अनलाइन भ्रमण गर्नुहोस्
WP इन्जिन $ 29 / mo $ 29 / mo परिवर्तन छैन अनलाइन भ्रमण गर्नुहोस्
* नोट: होस्टपापा र InMotion होस्टिंग मूल्य WHSR को विशेष सौदों मा आधारित छ। सबै मूल्यहरू जनवरी 2019 मा सही जाँच गरियो।
6। फिर्ता रकम र नि: शुल्क परीक्षण अवधि
के तपाइँ परीक्षण अवधि भित्र आफ्नो होस्टिंग योजना रद्द गर्न रोज्नुहुन्छ, के कम्पनीले पूर्ण पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी दिन्छ?
परीक्षण अवधि समाप्त भएपछि होस्टिङ कम्पनीको फिर्ती नीति के हो?
त्यहाँ कुनै रद्द शुल्क वा अतिरिक्त शुल्कहरू छन्?
यी केही आधारभूत प्रश्न हुन् जुन तपाईले साइन अप गर्न अघि जवाफहरू पाउनु पर्छ।
यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको होस्टिङ प्रदायक ग्राहक ग्राहक रिफन्डहरू कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ ताकि चीजहरू गलत भएमा तपाईले धेरै पैसा गुमाउनु हुँदैन।
केही होस्टिङ कम्पनीहरू जसले बेपत्ता रूपमा उच्च रद्द शुल्क शुल्क लगाउँछन् जब प्रयोगकर्ताले परीक्षण अवधिहरूमा आफ्नो खाता रद्द गर्छन्। हाम्रो सल्लाह? सबै लागतमा यी होस्टिंग प्रदायकहरूबाट बचाउनुहोस्! अर्कोतर्फ, केहि होस्टिङ कम्पनीहरूले तपाईंको परीक्षण अवधि समाप्त भएपछि (राम्रो ईह?) पछि एक प्रो-रेटेड रिफन्डको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ जहाँ पनि पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ।
7। वेब होस्टमा आवश्यक विशेषताहरू
निश्चित, केहि चीजहरू जस्तै फाईल ब्यबश्थापन र साइट तथ्या .्कहरू जहिले पनि त्यहाँ हुन्छन्, तर ftp / sftp, एक क्लिक स्थापनाकर्ता, र DNS प्रबन्धनमा नजर राख्छ। साथै, त्यहाँ फाईल प्रबन्धक हुनुपर्दछ - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं त्यहाँबाट .htaccess फाइल सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ।
एक-क्लिक स्थापनाकर्ताहरू विभिन्न स्वादहरूमा आउँछन् Softalucous or सरल स्क्रिप्ट.
साइटग्राउन्ड cPanel ड्यासबोर्ड अनुकूलित छ त्यसैले यो WordPress को रूपमा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू स्वत: स्थापना गर्न सजिलो छ, PrestaShop, र जुमला।
कुनै पनि तरिका, एक-क्लिक स्थापनाकर्ताको उद्देश्य तपाईंको जीवनलाई धेरै सजिलो बनाउनु हो। यी स्थापना स्थापना विजार्डहरू छन् जुन तपाईंलाई WordPress, Joomla, Drupal, वा अन्य वेब अनुप्रयोगहरूको होस्ट जस्ता चीजहरू स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईलाई आवश्यक पर्दछ केहि नामहरुमा भरिएको छ र सायद एक डाइरेक्टरी वा त्यहि तरिकाको साथ निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
FTP / SFTP पहुँच
FTP / SFTP पहुँच धेरै सुरक्षित फाइलहरू सार्नको लागि अमूल्य छ। केही होस्टहरू केवल फाइल प्रबन्धकसँग टाढाको प्रयास गर्छन्, तर त्यो सामान्यतया सीमित छ।
InMotion होस्टिङमा SSH पहुँच।
.htaccess फाइल पहुँच
.Htaccess फाइल पनि अत्यन्त शक्तिशाली छ र तपाईंलाई साइट व्यापक प्रशासनिक परिवर्तनहरू बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। यसले पासवर्ड प्रमाणिकरण र व्यवस्थापन माथि पुनःनिर्देशित सबै लगभग नियन्त्रण गर्दछ, र तपाईंको भविष्यको प्रयासमा केही बिन्दुमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
जबसम्म तपाईं WP Engine र Pressidium (प्राय: WordPress होस्टिंगमा यी फोकसहरू) जस्तै विशेषता वेब होस्टमा साइन अप गर्दै हुनुहुन्छ, यी आधारभूत फिचरहरू अनिवार्य छन्। तपाईं तिनीहरूलाई आपूर्ति नगर्ने होस्टिङ प्रदायकहरूसँग मेल खाँदैन।
हाम्रो प्रयोग गरी विभिन्न होस्टिंग कम्पनीहरू द्वारा प्रदान गरिएको आवश्यक सुविधाहरूको तुलना गर्नुहोस् होस्ट तुलना उपकरण। तपाईंलाई सुरु गर्न यहाँ केहि सामान्य खोजी गरिएका तुलनाहरू छन् -
BlueHost vs InMotion होस्टिंग बनाम SiteGround
A2 होस्टिंग vs Inotionotion होस्टिंग र Interserver
A2 होस्टिंग बनाम ब्लू होस्ट
Hostgator vs InMotion होस्टिङ
Hostinger बनाम InMotion होस्टिङ
8। ई-वाणिज्य विशेषताहरू
के तपाइँ ई - वाणिज्य वेबसाइट चलाइरहनुभएको छ?
के तपाइँ कुनै विशेष खरीदारी कार्ट सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
के तपाइँले तपाइँको वेबसाइटमा व्यापार लेनदेन प्रशोधन गर्न आवश्यक छ?
के तपाईलाई विशेष प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ (यानी। प्रिस्टोप गाइड, वा यति)?
यदि हो भने, त्यसोभए तपाईका लागि महत्वपूर्ण ई-वाणिज्य सुविधा समर्थनसँग वेब होस्ट छनौट गर्नु आवश्यक छ। SSL प्रमाणीकरण, समर्पित IP, र एक-क्लिक किनमेल कार्ट सफ्टवेयर स्थापना केहि आवश्यक विशेषताहरू / समर्थनहरू जुन तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ।
Azrin को लेख पढ्नुहोस्5सबै भन्दा राम्रो वेब साना व्यवसायहरुको लागि होस्टिंग.
9। एक सजिलो-प्रयोग-होस्टिङ नियन्त्रण कक्ष
व्यापक कार्यक्षमताको साथ प्रयोगकर्ता-अनुकूल नियन्त्रण प्यानल धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो होस्टिंग खाताको मस्तिष्क हो।
यसले फरक पार्दैन यदि यो हो भने cPanel वा Plesk वा तेस्रो-पार्टी नियन्त्रण प्यानल (जस्तै GoDaddy ले प्रस्ताव गर्दछ), जबसम्म यो उपयोगकर्ता मैत्री छ र सबै आवश्यक कार्यहरू सहित आउँदछ। पर्याप्त नियन्त्रण प्यानल बिना, तपाईं होस्टि t प्राविधिक सहयोगी स्टाफको कृपामा छोडिनुहुनेछ - तपाईंलाई आवश्यक सबै थोरै आधारभूत सेवा भएता पनि।
मैले एकपटक IX वेब होस्टिङको साथ खाता पाएको छु, र यद्यपि यो खराब होस्ट होइन - धेरै समर्पित मूल्यमा बहु समर्पित आईपीहरू, साथै ठूलो प्रविधि समर्थन - मैले मेरो खाता रद्द गर्नुपर्थ्यो किनभने यसको अनुकूलन प्यानल धेरै प्रयोगकर्ता-मित्रताजनक थियो।
विभिन्न वेब होस्टहरूमा नियन्त्रण प्यानल प्रयोग गरियो
A2 होस्टिंग - -
आइपेज - -
Scala होस्टिंग - -
10। खाता निलम्बन: सीमा के हो?
यहाँ एक मुद्रा टिप छ जुन प्राय होस्टिंग समीक्षा साइटहरूले तपाईंलाई भन्दैन: होस्टिंग कम्पनीहरूले प्लग तान्ने छ र तपाईंको खाता निलम्बन गर्दछ यदि तपाईं धेरै सीपीयू पावर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ वा नियमहरू उल्ल vio्घन गर्दै हुनुहुन्छ भने।
असीमित होस्टिंग को वास्तविकता
केहि लोकप्रिय वेब होस्टिंग प्रदायकहरूमा तपाई "असीमित होस्टिंग" भन्ने शव्द आउन सक्नुहुन्छ। असीमित होस्टिंग एक बजवर्ड हो जुन धेरै साझा होस्टिंग प्रदायकहरूमा असीमित भण्डारण र ब्यान्डविथ वितरित गर्ने तिनीहरूको क्षमता वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको थियो।
दुर्भाग्यवश, धेरै असीमित होस्टिंग समाधान तपाईलाई सोच्नु भन्दा अधिक सीमित छ।
यो कुरा हो, एक "असीमित होस्टिंग" योजना मात्र "असीमित" हुन्छ जब तपाईं सर्भर संसाधनहरू भन्दा कम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
लोकप्रिय विश्वासको विपरित, ब्यान्डविथ र भण्डारण स्थान कम्पनीहरू द्वारा सीमित हुने झुकाव हुँदैन। यसको सट्टा, यो सीपीयू र मेमोरी हो जुन सीमितताका साथ लागू गरियो।
उदाहरण को लागी, 5,000 आगन्तुकहरु संग एक दिन को वेबसाइट एक यातायात ह्यान्डल गर्न को लागी सक्षम हुन सक्दछ यदि मेमोरी र सीपीयू पावर को लागी एक सीमा छ, पर्याप्त सर्वर ब्यान्डविथको बावजुद।
कम्पनिको लागि एकसाथको डाटाबेस जडानमा सीमितताहरू समावेश गर्न वा खाताले प्रयोग गर्न सक्ने CPU चक्रको संख्या, उनीहरूको ToS मा समावेश गर्न यो असामान्य छैन।
यो मूल रूपमा सबै-तपाइँ-खान-बुफे जस्तै समान छ, यसमा, होस्टिंग प्रदायकले तपाइँलाई "असीमित" स्रोतहरूमा पहुँच दिन्छ तर तपाइँ केवल उचित रकम प्रयोग गर्न लाग्नुहुन्छ।
शैतान विवरण मा छ
जबकि "असीमित" योजनाहरूको सीमितताहरू छन्, यो अझै पनि उच्च छ। कम्पनीको सेवा सर्तहरू (ToS) मा ठीक प्रिन्ट पढ्दा तपाईंलाई असीमित होस्टिंग सेवाहरूको लागि उनीहरूले लगाउने सीमाको स्पष्ट परिभाषा हुन्छ। नियम र सर्तहरूमा तपाईंलाई कहीँ बताइनेछ कि तपाईंको खाता संसाधनहरूको अधिक उपयोगको लागि निलम्बित वा अन्त्य हुन सक्छ - उनीहरूले सामान्यतया तपाईंलाई कति बताउँदैनन्। यो पनि निश्चित छ कि लगभग सबै वेब होस्टले कुनै पनि अवैध फाईलहरू र / वा सेवाहरूको होस्टिंग सहन गर्दैन। त्यसोभए यदि तपाईं वेबसाइट चलाउन चाहानुहुन्छ व्यक्तिले पायरेटेड फाइलहरू डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ भने, तपाईं सायद प्राय भागको भाग्यबाट बाहिर हुनुहुन्छ।
तपाइँको खाता सीमा थाहा पाउँदा तपाइँले दुईवटा कुरा बुझ्न मद्दत गर्दछ -
तपाईंको छोटो सूचीबद्ध वेब होस्टहरू कसरी उदार (वा ठुलो) हुन् - तपाईं योसँग जानुहुन्छ, वा ढोका बन्देजमा अर्को होस्ट?
तपाईंको होस्टिङ कम्पनी कस्तो पारदर्शी हो - के तपाईं आफ्नो होस्टिंग कम्पनीबाट बाहिर जाने शब्दहरू विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? इमानदार होस्टिंग कम्पनीहरू सामान्यतया खाता सीमा र सेवाका सर्तहरूमा धेरै स्पष्ट निर्देशनहरू छन्।
उदाहरण: आइपेज TOS
उदाहरणका लागि, यहाँ आइप्याजको TOS मा के लेखिएको छ - रेखांकित वाक्यहरू नोट गर्नुहोस्।
प्रयोगकर्ता सहमत छ कि प्रयोगकर्ताले कुनै पनि आईपिएसको सर्भरहरूमा सीपीयू प्रशोधनको अत्यधिक मात्रा प्रयोग गर्दैन। यस नीतिको कुनै पनि उल्ल violation्घनले आइपिएजद्वारा सुधारात्मक कार्यको परिणाम हुनसक्दछ, थप शुल्क, विच्छेदन वा कुनै पनि वा सबै सेवाहरूको विच्छेदन, वा यो सम्झौताको समाप्ति सहित, […]
पूरा iPage समीक्षा यहाँ पढ्नुहोस्
11। पर्यावरण मित्रता
पारिस्थितिकी-अनुकूल वेबसाइटमा केहि वेबमास्टरहरूको लागि प्राथमिक चिन्ता होस्ट।
अनुसार विज्ञान अध्ययन, औसत मा एक वेब सर्भर 630 किलो कोक्सिनमक्स भन्दा अधिक उत्पादन गर्दछ (जो धेरै छ!) र वार्षिक रूपमा ऊर्जा को2KWh खरिद गर्दछ। A हरियो वेब होस्ट अर्कोतर्फ, सैद्धान्तिक रूपमा शून्य CO2 उत्पन्न गर्दछ। त्यहाँ साँच्चै हरियो वेब होस्ट र एक गैर-पारिस्थितिकी-अनुकूल वेब होस्ट बीचको ठूलो भिन्नता छ।
यदि तपाईं वातावरणको बारे चिन्ता गर्नुहुन्छ र कार्बन पदचिन्हलाई कम गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँको कम्पनी वा आफैंमा जिम्मेवार हुन्छ, एउटा वेब होस्ट छनौट गर्नुहोस् जुन अक्षय ऊर्जा (वा कम्तीमा, एउटा वेब होस्ट जसले हरी प्रमाणपत्रहरू मार्फत आफ्नो ऊर्जा खपत offsets) चलाउँछ।
उपयोगी सल्लाह: धेरै होस्टिंग कम्पनीहरूले केही वर्ष पहिले "हरित मार्केटि strategy रणनीति" प्रयोग गर्दछन् तर आजकल त्यो अलि कम देखिन्छ। मेरो अवलोकनको आधारमा, ग्रीनजेक्स सक्रिय रूपमा हरियो हुँदै जाने केहि मध्ये एक हो (GreenGeeks 'EPA ग्रीन पावर पार्टनर सूची यहाँ जाँच गर्नुहोस्).
GreenGeeks 2008 मा सुरु भएको थियो। उनीहरूको ताजा रिपोर्ट ईपीएमा पेश गरिएको थियो 2016 जुलाई (स्रोत).
12। [इमेल सुरक्षित]
यदि तपाइँ आफ्नो वेबसाइटसँग एकसाथ इमेल खाताहरू होस्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले साइन अप गर्नु अघि ईमेल सुविधाहरू हेर्नु पर्दछ। अधिकांश होस्टिङ कम्पनीहरू तपाईंको आफ्नै इमेल होस्ट गर्न सक्ने क्षमताको साथ आउनेछ (जस्तै [इमेल सुरक्षित]) तर हे, यो सधै राम्रो जाँच गर्न र यो निश्चित हुन हो, हाँ?
यदि ईमेल सुविधाहरू प्रदान गरिएको छैन भने, कुनै ठूलो सम्झौता छैन। त्यहाँ थुप्रै तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो डोमेनमा इमेल खाताको मालिक हुनुहुन्छ। जी सुइटउदाहरणका लागि, Google द्वारा प्रदान गरिएको सेवा हो जुन तपाईंलाई आफ्नै इमेलको स्वामित्व दिनेछु, तिनीहरूका सर्भरहरूमा होस्ट गरिएको छ। यो $5प्रति प्रयोगकर्ताको अनुसार प्रति महिनादेखि सुरु हुन्छ।
उपयोगी सुझाव: सिक्नुहोस् तपाईको ईमेल कसरी होस्ट गर्ने र यहाँ सर्वोत्तम ईमेल होस्टिंग पत्ता लगाउनुहोस्.
13। सदस्यता अवधि
यदि तपाइँ केहि वेब होस्ट बल खोज्नु हुन्थ्यो भने आश्चर्यचकित नगर्नुहोस् कि उनीहरुका ग्राहकहरु अनावश्यक लामो अनुबंधहरू लिनका लागि। उदाहरणका लागि, जून 2009 मा तिनीहरूको मूल्य निर्धारण ढाँचा परिवर्तन गरी ग्राहकहरू लाई $5/ mo सम्झौताको आनन्द लिनको लागी एक 4.95-वर्ष होस्टिङ अनुबंध लिने। लुनर्पेजहरूले अब यस्तो सम्झौता प्रदान गर्दैनन् भने केस अझै पनि उदाहरणको रूपमा सेवा गर्न सक्छ।
के तपाईं लामो समयसम्म होस्टिङ अनुबंध गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? हाम्रो जवाफ होईन - दुई बर्ष भन्दा बढि अवधिको दौडान कुनै पनि अवधिको लागि वेब होस्टलको साथ साइन अप नगर्नुहोस्, जब सम्म उनीहरूले स्पष्ट प्रस्ताव नगरेसम्म कुनै पनि समय पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी।
उपयोगी सुझाव: प्रयोगकर्ताहरू लामो सदस्यता अवधिको लागि जाने बेला होस्टिङ कम्पनीहरू सामान्यतया राम्रो प्रस्तावहरू दिन्छन्। छूट महान छन्; तर म दृढतापूर्वक सिफारिस गर्दछु कि प्रयोगकर्ताहरू2वर्ष भन्दा बढीका लागि पूर्व भुक्तानी गर्न चाहँदैनन्। टेक्नोलोजी छिटो विकास गर्दछ र तपाईले आफ्नो आवश्यकतालाई छोटो समयको समयमा धेरै फरक पाउन सक्नुहुनेछ।
14। साइट बैकअप
कम्प्यूटर दुर्घटनाहरू, उपकरणहरू विफल हुन्छन्, यी जीवनका तथ्याङ्क पनि मृत्यु र करहरू छन्। तपाईंको साइट पनि यी कारकहरू लाई कमजोर हुन सक्नेछ, वा सम्भवतया हैकर तपाईंको वर्डप्रेस ब्लगमा पाईयो र तपाईंको index.php फाइल प्रतिस्थापित भयो। सायद तपाईंको सम्पूर्ण डाटाबेस निक्कै छ।
यदि तपाइँले वेब होस्ट साइट ब्याकअप नियमित रूपमा राख्नुहुन्छ भने यी घटनाहरू आइपर्दा चिन्ता गर्ने केहि छैन। तपाईंको होस्टिङ प्रदायकले तपाईंको पूर्ण साइटलाई कुनै पनि समयमा पुनर्स्थापित गर्न सक्दछ (वा कम्तीमा, यसको ठूलो भाग)।
जगेडामा, तपाईंको वेब होस्टलाई सोध्नका लागि यहाँ केहि कुञ्जी प्रश्नहरू छन्:
के तपाईंको वेब होस्टले नियमित रूपमा ब्याकअप नियमित रूपमा प्रदान गर्दछ?
साइट ब्याकअपले म्यानुअल रूपमा नियन्त्रक प्यानल मार्फत गर्न सक्छ?
के तपाईं आफ्नो साइटको स्वतः ब्याकअप सजिलै संग क्रोन कार्यहरू वा अन्य कार्यक्रमहरू मार्फत सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं आफ्नो जगेडा फाइलहरू सजिलै संग आफैंद्वारा पुनःस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाइँले आपदा रिकभरीको अवधिको समयमा सहयोग गर्नको लागि समर्थन कर्मचारीको प्रतीक्षा गर्न पर्दैन?
उपयोगी सुझाव: महान ब्याकअप सुविधाहरूको साथमा वेब होस्टहरू कुनै अतिरिक्त लागतमा छैन - A2 होस्टिंग (स्विफ्ट योजनाहरु र माथिको लागि) वेब होस्ट फेस (अनुहार थप योजनाहरु र माथिको लागि) TMD होस्टिंग, Hostinger, र SiteGround.
15। प्रत्यक्ष च्याट वा टेलिफोन समर्थन
व्यक्तिगत रूपमा मैले व्यापक कागजातको साथ फोन र वेब होस्टिङ कम्पनीहरूमा प्रत्यक्ष च्याट मनपर्छ (त्यसैले मैले मात्र पढ्न र समस्याहरू समाधान गर्न सक्छु)।
तर त्यो मात्र हो। तपाई सट्टा ईमेल वा टेलिफोन समर्थन चाहानुहुन्छ।
अन्ततः, हामी कसैलाई चाहन्छौं जसले हामीलाई जीवन प्रिभरभर फेंक गर्न सक्छ तुरुन्तै एक पटक हामीले एसओओ बटन थिच्न सक्छौ।
मैले प्रयास गरे 28 होस्टिंग कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष कुराकानी समर्थन २०१ 2017 मा - साइटग्राउन्ड, InMotion होस्टिंग, वेब होस्ट फेस, WP इञ्जिन, र Go get Space यस परीक्षामा विजेताको रूपमा उभिए।
मेरो प्रत्यक्ष च्याट रेकर्डको स्क्रिनसटहरूमा वेबहोस्टप्राप्त। मेरो च्याट अनुरोधहरू सेकेण्ड भित्र जवाफ दिइएको थियो, र मेरा प्रश्नहरू पेशेवरलाई जवाफ दिइयो। वेब होस्ट समर्थन कर्मचारीको साथको समग्र अनुभव उत्कृष्ट थियो। मेरो विस्तार वेबहोस्ट्याट समीक्षा पढ्नुहोस्।
साईटग्राउन्ड - अद्भुत च्याट समर्थन सिस्टममांड धेरै सहयोगी समर्थन स्टाफ। उत्कृष्ट अनुभव समग्र। विस्तारित SiteGround समीक्षा पढ्नुहोस्।
१.. सर्भर प्रतिक्रिया / वेबसाइट होस्टिंग गति
हामी मतलब छैन यदि तपाईंको होस्टिङ कम्पनी तपाईले जवाफ दिन्छ छिटो वा होइन! प्रतिवेदनताले जबसम्म यो सर्भरले स्वीकार गरेसम्म कसैले कसैले तपाईंको डोमेन नाममा प्रवेश गर्दा हिसाबले समयको उपाय हो।
प्राय: पहिलो बाइटमा (TTFB) समयको रूपमा चिनिन्छ, तपाईंको सर्भर प्रतिक्रिया गति छिटो लोडिङ वेबसाइटमा आत्म-अभिविन्यासको लागि अधिक भन्दा बढी छ। यसलाई दस्तावेज गरिएको छ कि प्रयोगकर्ताले वेबसाइटको लोड गर्नको लागी लामो समयसम्म सम्भव छ, सम्भवतः उनीहरूले साइट छोड्नु अघि यो पनि लोड हुँदैछ।
तपाईंको वेबसाइट गतिले पनि प्रभाव पार्छ Google र अन्य खोज इञ्जिनले तपाईलाई खोजी परिणामहरुमा कसरी स्थान दिन्छ।
यो एकदम केहि छ कि वेब होस्टिंग कम्पनीले तपाईंलाई बताउनेछ। एक सामान्य दिशानिर्देश अक्सर मूल्य हो। शीर्ष-को-लाइन उपकरण र पूर्वाधार सस्तो हुँदैन। यदि तपाईंको होस्टले होस्टिंग गर्नका लागि तपाईंलाई $2चार्ज गर्न खर्च गर्न सक्दछ, चीजहरू थोडा माछा मार्ने छन्।
BlueHost भर्खरको गति परीक्षण - परीक्षण साइट by first488ms मा पहिलो बाइट फर्काई। विवरण ब्लुहोस्ट समीक्षा पढ्नुहोस्।
उपयोगी सुझाव: प्रयोग गर्नुहोस् जस्तै उपकरण बाइट चेक, Bitcatcha, र वेबपृष्ठ परीक्षण तपाईंको लागि साइट गति परीक्षण गर्न।
र्‍यापिंग अप: प्रत्येक वेबसाइटको बिभिन्न आवश्यकता हुन्छ
कुरा यो हो - "उत्तम" सँधै सापेक्ष शब्द हो। कसैको वेब होस्टिंग आवश्यकताहरूको स्थिर समाधान कहिले हुँदैन।
म एक सिफारिश छैन नि: शुल्क वेब होस्ट यदि तपाईं एक विशाल ई-कमर वेबसाइट बाहिर सुरू गर्दै हुनुहुन्छ। म निश्चित रूपमा सिफारिस गर्दैनु महँगो व्यवस्थित WordPress होस्टिंग यदि तपाईं एक सानो शौक ब्लग चलाउँदै हुनुहुन्छ।
बिभिन्न वेबसाईटहरुको बिभिन्न आवश्यकता हुन्छ। तपाईंलाई आवश्यक सबै सही सेवा प्रदायकको लागि हो तपाइँको वेबसाइट होस्ट गर्नुहोस्।
यो संसारमा सर्वोत्तम वेब होस्ट पत्ता लगाउने छैन; बरु, यो तपाईंको लागि वेब वेब होस्ट फेला पार्ने हो।
र त्यहाँ तपाइँसँग छ - मेरो वेब होस्ट किनमेल गाइड। मलाई आशा छ कि यसले तपाईंको होस्ट-छनौट प्रक्रिया थोरै सजिलो बनायो। एकचोटि तपाईंले आफ्नो होस्टिंग तयार गर्नुभयो, यो समय सिर्जना गर्ने र तपाईंको वेबसाइट अनलाइन राख्ने समय हो!
Host वेब होस्ट चयन जाँच सूचीमा फर्कनुहोस्
हाम्रो होस्टिंग समीक्षा कसरी काम गर्दछ?
हामी वेब होस्टको मूल्यांकन गर्न 80 पोइन्ट मूल्याङ्कन जाँच सूची प्रयोग गर्छौं।
हामी कसरी वेब होस्टलाई दर्जा दिन्छौं भनेर जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
अधिक वेब होस्टिंग खरीद मार्गनिर्देशन
उत्तम वेब होस्ट: हाम्रो शीर्ष १० पिक्स
बजारमा सस्तो होस्टिंग सेवाहरू
सब भन्दा चाँडो वेब होस्टिंग प्रदर्शन
व्यवसायका लागि उत्तम होस्टिंग
लेखकहरूका लागि उत्तम होस्टिंग
वेब होस्ट समीक्षा तालिका
वेब होस्ट चयन जाँच सूची
१- तपाईंको होस्टिंग आवश्यकताहरू जान्नुहोस्
२- सर्वर विश्वसनीयता जाँच गर्नुहोस्
- होस्टिंग अपग्रेड विकल्पहरू
- एडेन डोमेन को संख्या
Sign- नवीकरण मूल्य बनाम साइनअप मूल्यहरू
Ref- रकम फिर्ता नीति र निःशुल्क परीक्षण अवधि
7- आवश्यक होस्टिंग सुविधाहरू
8- e- वाणिज्य सुविधाहरू र समर्थन
- होस्टिंग नियन्त्रण प्यानल
१०- खाता सीमितता
११- वातावरणीय मैत्री
१२- ईमेल होस्टिंग ([इमेल सुरक्षित])
१-- सदस्यता अवधि
१-- साइट ब्याकअप
१-- प्रत्यक्ष कुराकानी / टेलिफोन समर्थन
१-- सर्भर प्रतिक्रिया
असीमित होस्टिंग बारेमा सत्य
वीपीएन समीक्षाहरू: ExpressVPN / NordVPN / Surfshark / CyberGhost / TorGuard
सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क वेब होस्टिंग साइटहरू (२०२०)